Abaholi be-ANC bagxeka ukuhlaselwa kwabalimi | News24
Abaholi be-ANC bagxeka ukuhlaselwa kwabalimi
ABAHOLI beqembu le -ANC sebephumele obala bagxeka izigameko zakamuva zokuhlaselwa kwabalimi epulazini elisendaweni yaseVerulam bathi lokhu kakuhambisani nentando yeningi.
Ngesonto eledlule, ababhikishi ababalelwa ngaphezu kwekhulu bashisa amathayi bekhuza neziqubulo bezama ukuxosha ngenkani abalimi epulazini lase iNanda.
Esitatimendeni esithunyelwe abezindaba i-ANC ithe:
“Kuhlale njalo kunokushayisana phakathi kwabahlali basemijondolo kanye nabantu abasuke bakhele leyondawo. Uphiko olubhekelele ukususwa kwabantu abahlezi ezindaweni ngokungemthetho lubhekene nomsebenzi onzima. Kufanele sikugcizelele ukuthi ukuthatha umhlaba ngo dli akukho emthethweni ngoba lokho kuphinda kuthikameza amalungelo abahlali. Siphatheke kabi ngomthelela ongaba khona phakathi kwabantu abahlala kulendawo futhi sinxusa bonke abantu abathintekayo ukuthi behlise imimoya.”
UNobhala weqembu esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnu Super Zuma uthe izimfuno ezimayelana nomhlaba zisemthethweni futhi iqembu le-ANC liyaziphendula zonke izidingo zomphakathi.
“Umhlaba ubaluleke kakhulu ekuhlangabezaneni nezingqinamba zobumba nokwentuleka kwamathuba emisebenzi. Iqembu le-ANC limi ekumeleni amalungelo abantu, kodwa liyaphikisana nokudliwa kwemihlaba ngokungekho emthethweni,” echaza.
Ngesikhathi kunombhikisho kwalimala abasebenzi basepulazi baphuthunyiswa ezibhedlela besisimweni esibucayi ngemuva kokuthi ababhikishi bebajikijele ngamatshe bezama ukubaxosha epulazini.
Ababhikishi baveza ukuthi bathole umyalelo oqhamuke enkosini yesaMaqadini iNkosi Mqoqi Ngcobo othi abathathe izindawo ezisepulazini lase Inanda Tea Estate.
Lokhu kwaholela ekutheni inkosi uNgcono ibize umhlangano ophuthumayo Phakathi kwabalimi kanye nabamele abahlali owawuse siteshini samaphoyisa eVerulam. Inkosi Ngcobo wakuphika ukuthi wake wakhipha umyalelo wokuthi abantu badle umdlaba. Ngesikhathi leliphephandaba lithinta omunye umlimi uMnu Willie Naicker (50) uthe: “Bekufanele sihlangane nabahlali ukuze sizwe izinto abakhala ngazo kodwa lokho kakuzange kwenzeke. Emhlanganweni owawuse Verulam kwavunyelwana ukuthi kuzoba nomhlangano Phakathi kwabalimi kanye nabahlali, kodwa sibona kungekho muntu oza kithi. Siyafisa ukuxoxa ne-ANC ukuze sithole izikhalazo zabahlali. Lapha epulazini sinezisebenzi ezibalelwa ema-500, zonke ziyadinga ukwazi ukuthi kwenzekani epulazini,” echaza.
Ngesikhathi sokuloba abaphoyisa ase Verulam abephenya icala lokususa uthuthuva emphakathini, bekungakabosha muntu ngalesi sigameko..